Ny lahatsoratr'i Deb Gabor momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Deb Gabor
Deb Gabor no mpanoratra an'i Ny firaisana ara-nofo dia firaisana ara-nofo: esory ny mpanjifanao ary amidio ny helo na amin'inona na amin'inona. Izy no mpanorina ny Sol Marketing izay nitarika fifampiraharahana paikady marika ho an'ny fikambanana manomboka amin'ny anaran'ny ankohonana iraisam-pirenena toa an'i Dell, Microsoft, ary NBC Universal, ka hatramin'ny mpandresy nomerika toa ny Allrecipes, Cheezburger, HomeAway ary RetailMeNot, ary teknolojia am-polony sy nomerika am-polony titans media.
Ireo archetypes marika 12: iza ianao?
Mila fanarahana tsy mivadika isika rehetra. Izahay dia mitady hatrany ny drafitra marketing mahagaga izay hampifandray antsika amin'ny mpihaino anay ary hahatonga ny vokatray ho ampahany tsy azo soloina amin'ny fiainany. Ny tsy takatsika matetika dia ny fifandraisana dia fifandraisana. Raha tsy fantatrao tsara hoe iza ianao, dia tsy misy olona liana aminao. Zava-dehibe ny fahafantaranao hoe iza ny marikao, ary ahoana no tokony hanombohanao fifandraisana